Naas-nuujinta Ubadka oo Hoos u Dhigta Kansarka ku Dhaca Ugxanta Taranka Dumarka – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Naas-nuujinta Ubadka oo Hoos u Dhigta Kansarka ku Dhaca Ugxanta Taranka Dumarka
Naas-naajinta ubadka ayaa haweenka saddex meeloodow laba hoos uga dhigtaa khataraha kansarka abbaara ugxaanta taranka ee dumarka. Sidaasna waxa shaaca ka qaaday saynisyahanno u dhashay dalka Australia.
Dhakhaatiirtani waxay sheegeen in daawada ugu fiican ee dumarku kaga hortagi karaan kansarka ku dhacaÃƒâ€šÃ‚Â ugaxaanta taranku ay tahay naas-nuujinta ubadkooda muddo dheer.
Cilmi-baadhistani waxy sii xoojisay daraasado hore loogu bandhigay faa?iidooyinka naas-nuujinta dabiiciga ah ee ilmaha inuu ka hortago kansarka ku dhaca naasaha dumarka.
In ka badan 6,000 bukaan dumar ah ayaa sannad kasta waddanka Ingiriiska laga helaa kansarka ugaxaanta taranka haweenka ku dhaca, waxana la tilmaamaa in 5% dhimashada dumarka ee dalkaas uu cudurkani sabab u yahay.
Cudurkan ayaa dhakhaatiirta Ingiriisku u yaqaanaan ?Dilaagii Aamusnaa? (Silent Killer), sababtoo ah astaamihiisa ayaan hore loo arag, qofka bukaanka ahna hore looma ogaado ilaa uu soo rito.
Daarasaddan ay saynisyahannada Australian-ka ah soo saareen dhowaan oo lagu tijaabiyey 493 haween ah oo cudurkan haleelay iyagoo barbardhig ku sameeyey 472 dumar iyagu caafimaad qaba, isla markaana isku da? yihiin.
Gabadh kasta waxay weydiiyeen tirada carruurteeda iyo muddada ay ilmo kasta naaska jaqsiisay, waxaanay natiijadii u soo baxday noqotay in haweenka ubadkooda ugu yaraan naas-nuujinayey 13 bilood ay 63% ka badbaadeen cudurkan, halka kuwa wax ka yar 7 biloodna uu ku dhacay kansarka ugxaanta xubinta taranka.
Cilmi-baadhistan oo lagu daabacay wargeyska American Journal of Clinical Nutrition, ayaa lagu sheegay in hooyooyinka 3 carruur ah ee 31 bilood naas-nuusay guud ahaan inay 91% ka badbaadi karaan fursadaha lagu qaadi karo kansarka ku dhaca ugxaanta taranka, iyadoo la barbardhigay kuwa iyagu wax ka yar 10 bilood ubadkooda naaska jaqsiiyey.
Dr. Helga Grol oo ka hawlgala xarunta cilmi-baadhista Kansarka Ingiriiska, ayaa sheegay in daraasaddani sii xoojisay faa?iidooyinka caafimaad ee ku jira naas-nuujintu.
?Waxa la caddeeyey in naas-nuujintu hoos u dhigto kansarka ku dhaca ugxaanta taranka, waayo waxay hoos u dhigtaa dhaawacyda iyo dhiigga ka iman lahaa hooyada naas-nuujinaysa, waxaanay khatartu marba marka ka sii dambaysa sii yaraataa haddii hooyadu ubad badan jaqsiiso naaska.? Sidaa waxa tidhi Gilda Witte oo ah madaxa fulinta xarunta baadhitaanka kansarka ku dhaca ugxaanta taranka. Ãƒâ€šÃ‚Â
Nin Nolol Sare Ku Noolaa oo Mar Qura Iloobay Dhammaan Wixii Noloshiisa la Xidhiidhay, Xataa Qoyskiisii.
KaLaFoGe March 6, 2013
Sagaal Qodob Oo Muhiim Ah Kuna Saabsan Ictikaafka Wax Badana Ka Baro Waa Maxay Ictikaaf.
KaLaFoGe July 19, 2014 July 19, 2014
DAAWO SAWIRADA:-Laba ka mid ah 4-tii nin ee dishay Nafisa Cusmaan oo gacanta lagu soo dhigay
KaLaFoGe April 20, 2014